သေနတ်များနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အမဲ | Martech Zone
ငါကဒီမှာ Indiana ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုနောက်တစ်ယောက်လိုထပ်ခါထပ်ခါကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ ငါအလုပ်ထုတ်မယ်လို့ထင်တဲ့အခါ, ငါခြုံငုံ monotonous ထုတ်လုပ်မှုပရိသလိုင်းအချို့လုပ်နေတာ coveralls အတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ထပ်ခါထပ်ခါအလုပ်လုပ် သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အမြင်သည်ယနေ့ခေတ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မတူပါ။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောစကားလုံးများပင်မဟုတ်ပါ။ သူတို့အသက်ကြီးလာပြီ သူတို့ပျင်းစရာကောင်းတယ် သူတို့ကိုအခြားမည်သည့်လမ်းဖြင့်ပုံဖော်ရန်ခက်ခဲသည်! အမှန်တရားကတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဟာပျင်းစရာကောင်းပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည်တက်ကြွသောမြန်နှုန်းမြင့်အလိုအလျောက်နှင့်တူသည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသည်ပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်များကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြီးထွားနေသောနည်းပညာများနှင့်ပေါင်းစပ်ရှုပ်ထွေးသောဆော့ဖ်ဝဲလ်မော်ဒယ်များနှင့်တူညီသည်။
လူအများစုကသင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလူအများစုသဘောမပေါက်သည့်အချိန်တွင်အစိုးရတစ်ခုလုံး၊ အစိုးရ၊ မိဘများနှင့်ကလေးများကသင့်ကိုမည်သို့ထင်မြင်ပုံကိုပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကဘယ်လိုပြောင်းလဲစေသလဲ။ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ပညာတတ်များကဲ့သို့သြဇာသက်ရောက်သူများအတွက်ပုံမှန်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်သေချာသည်။ သို့သော်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောအလုပ်များကိုသင်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည့်သူများကိုသင်မည်သို့ပစ်မှတ်ထားသနည်း။ ဒါကဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာငါ့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်!
လေးနှစ်ကောလိပ်၏မယုံကြည်မှုများအခြေချနေထိုင်သည့် Indiana ပြည်နယ်ကဲ့သို့သောပြည်နယ်တစ်ခုတွင် (ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာကောလိပ်နှင့် ၂ နှစ်ကုန်သွယ်ရေးကောလိပ်များမှလူငယ်စွမ်းရည်များကိုသင်မည်သို့ဆွဲဆောင်သနည်း။ အဲဒါကသုံးဆလောက်အဆိုပြုချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
သေချာအောင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်စာရင်းဇယားများ၏ခါးသီးသောအဖြစ်မှန်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ၄ နှစ်ကျောင်းများမှစတင်သောကျောင်းသားအများစုသည်ဘွဲ့မရကြပါ။ ထို့အပြင်သူတို့၏ဘွဲ့များကိုသိမ်းပိုက်ထားသူများအနက်မှများစွာသောသူတို့သည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန်အခက်တွေ့နေသည်။ ၄ နှစ်ဒီဂရီပရိုဂရမ်သို့ C + ကျောင်းသားကိုပြောသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်၎င်းတို့အားမည်သည့်ကောင်းကျိုးကိုမျှလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကမျိုချဖို့ခက်ခဲတဲ့ဆေးပါ။
မိဘများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏ကလေးများနှင့်ဆွေးနွေးရန်အခွင့်အလမ်းများကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ငါ့မှာ သားရဲ့ သူဟာသာမန်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကသူ့အိမ်တံခါးကိုနေ့တိုင်းခေါက်နေတယ်။ ဘီလ်သည် IUPUI တွင်စတင်ခဲ့ပြီးသင်္ချာနှင့်ရူပဗေဒဘာသာရပ်တွင်အထူးဂုဏ်ပြုဆုနှစ်ဆတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်တက္ကသိုလ်ရှိအခြားကျောင်းသားများကိုကျူရှင်ပေးရန်ပညာသင်ဆုနှင့်အလုပ်များကိုစတင်ဆွဲဆောင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်၏သားနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်အချက်မှာ - အကယ်၍ သူ့ကျောင်းတွင်သင်ရန်အရင်းအမြစ်များမရှိလျှင်သူသည်စစ်တပ်နှင့်အလွယ်တကူစကားပြောဆိုနိုင်သည်။ ငါဝါရင့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်နောင်တမရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူ့အသက်မှာရွေးချယ်စရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ သူ့မှာရွေးချယ်စရာတွေရှိခဲ့တယ်။ အကယ်၍ ၄ နှစ်ဒီဂရီပရိုဂရမ်သည်မအောင်မြင်ခဲ့ပါကသူသည်ထူးခြားသောကုန်သွယ်ရေးကျောင်းအတွက်အလားအလာရှိလိမ့်မည်။ သူနှင့်ငါသော်လည်း, သတိပြုမိကြဘူး
မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုအတွက်မဆိုအဓိကသော့ချက်မှာပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ရာဘာလမ်းကိုဝင်တိုက်သည်။ မင်းရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့စျေးကွက်ကို Moms and Dads အပေါ်ဘယ်လောက်အကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာငါဂရုမစိုက်ဘူး။ မင်းကဒီကလေးတွေပေါ်မလာရင်၊ သင်ကျရှုံးလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုသူတို့ကိုဘယ်မှာရှာမလဲ။ Facebook လား တွစ်တာလား မိုဘိုင်းလား။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ? ကျောင်းမှာ? လူငယ်အုပ်စုများလား။
ဟုတ်တယ်၊ နေရာတိုင်းမှာသူတို့ကိုရှာ။ ကွဲပြားခြားနားသောအတွေးများ၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများကိုပညာပေးရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ငါ့သမီးကိုတွေ့နိုင်တယ် ဓာတ်ပုံရိုက်သည် သူတို့ကိုမျှဝေ။ သူမ Flip ကင်မရာဖြင့်ဗီဒီယိုများကိုလည်းစမ်းသပ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ Instant Messenger နဲ့သူမရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းပေါ်မှာပါ။ တခါခဏတော့သူမသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆုံပြီးကစားပါလိမ့်မယ် ရော့ခ်တီးဝိုင်း.
My သားဘလော့ဂ်များ (ရံဖန်ရံခါတွင်) သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ရှိနေပြီး MySpace ရှိသူ၏အခြားဂီတပညာရှင်သူငယ်ချင်းများနှင့်လည်းပူးပေါင်းသည်။ ဒါ့အပြင်သူ့ကိုသူအကြိုက်ဆုံးတွေ့တဲ့နေရာမှာတွေ့လိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Bean ကိုဖလား (သူငါ့ကိုချိတ်ဆက်တယ်) နှင့် Waffle အိမ်... ဟုတ်တယ်, Waffle House ။
ယနေ့ခေတ်တွင်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ရွေးချယ်မှုများရှိပြီးမိမိတို့တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏သားနှင့်သမီး၏သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်သာကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်ကကဲ့သို့ပုန်ကန်နေကြသည်။ သူတို့ဟာပျက်စီးနေပါတယ် သူတို့မှာကစားစရာအရုပ်တွေရှိတယ်။ သူတို့မှာအင်တာနက်ရှိတယ်။ သူတို့မှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူတို့ကကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုမကြိုက်ဘူး။ သူတို့ဟာအစိမ်းကိုကြိုက်တယ်။ သူတို့ကဘာကိုဆိုလိုသည် ... ကမ္ဘာမြေကိုကယ်တင်ချင်တယ်။
ယနေ့ခေတ်လူငယ်များကိုထိတွေ့ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များ၏ကောင်းစွာဒီဇိုင်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းနည်းများထက်ပိုသည်။ အရောင်းရဆုံးနေရာအတွက် Nike ရုပ်ရှင်အားလုံးမှာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် hightops တွေကိုဖွင့်တဲ့အခါငါမှတ်မိသေးတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့စနီကာဖိနပ်ကိုရှာချင်ကြတယ်။
သင်ဆယ်ကျော်သက်များကိုလိုက်ရှာမည်ဆိုလျှင်သေနတ်တစ်လက်ယူဆောင်လာပါ။ လွှမ်းမိုး Google, Youtube ကို, Flickr ကို, Facebook က (နည်းနည်းအိုလွန်းကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်)၊ ငါ့နေရာ၊ ဂီတမြင်ကွင်း၊ ကုန်တိုက်၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ဆဲလ်ဖုန်းများနှင့်ဒေသခံကော်ဖီဆိုင်များသို့မဟုတ် Waffle House တို့ကအစကောင်းပေမည်။
ကျွန်မရဲ့အကြံပေးချက်ကဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်နေရာတစ်ခုလွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ် be သူတို့ဘယ်မှာသွားမယ့်အစား များမှာ။ ကျွန်ုပ်၏ကလေးများသည်ဒေသတွင်းနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလူငယ်များကိုသူတို့ဆွဲထားခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်မည်သည့်သတင်းကောင်းကိုမျှပြောနိုင်ခြင်းစသည့်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။ သူတို့ဟာသတင်းတရားအတွက်အမြဲမလာကြဘူး၊ ထိုနေရာသည်အုတ်နှင့်အင်္ဂတေစက်ရုံတည်စရာမလိုပါ၊ အွန်လိုင်းသည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့အတွေးတွေလား။ ဓာတ်ပုံနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အလွန်ကောင်းသောရာထူး ရှုထောင့်ဘလော့ဂ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Tags: favicon animatedကွန်ဖရင့်ဆော့ဖ်ဝဲရက်တွေအီးမေးလ်အကြောင်းအရာစိတ်ကြိုက်အိုင်ကွန်favicon မီးစက်အခြားရွေးချယ်စရာ gotomeetingအရောင်း softwarewebex အစားထိုးWordPress
ဇွန်လ 24 ရက် 2008 ခုနှစ် နံနက် 12 နာရီ 32 မိနစ်
ကောင်းမွန်သောပို့စ်။ စဉ်းစားစရာတွေ ပိုပေးတယ်၊ ငါ့ကလေးနှစ်ယောက် ဆယ်ကျော်သက်မပြည့်ခင် နှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီ၊ ဒါပေမယ့် ငါမသိခင်မှာ ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်။ အဆိုးဆုံးအရာတွေထဲက တစ်ခုက ကလေးတွေကို ကောလိပ်တက်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးရင် တွန်းပို့လိုက်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ အခြားရွေးချယ်စရာများ- စစ်တပ်၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ။
ဇွန်လ 24 ရက် 2008 ခုနှစ် နံနက် 10 နာရီ 05 မိနစ်
ထို့အပြင် လူတိုင်းသည် ရုံး သို့မဟုတ် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် တစ်နေ့လုံးမနေချင်ကြပါ။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၃ နှစ်က စားပွဲပေါ်တွင် သံကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်ခံထားရသော ကလေးများစွာရှိပြီး စာရိုက်ခြင်းမှလွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်လိုသူများ၊ ထုတ်လုပ်မှုသည် C ကျောင်းသားများအတွက်သာ မဟုတ်ပါ။ အရောင်းအ၀ယ်အလုပ်တွေမှာ ထက်မြက်တဲ့လူတချို့ဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုလုပ်ရတာကို ပိုသဘောကျတဲ့သူတွေကို သိဖူးတယ်။
Peter သည် နောက်ဆုံးတွင် ကုတင်ထဲတွင်ရှိမည့်အစား သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့သားတစ်ဦးတွင် အလုပ်လုပ်ရသည့်အတွက် ပျော်ရွှင်နေသည့် Office Space ကို တွေးစေသည်။
ဇွန်လ 24 ရက် 2008 ခုနှစ် နံနက် 10 နာရီ 23 မိနစ်
မင်းက လုံးဝမှန်ပြီး ဒီအလုပ်တွေက ပျမ်းမျှကျောင်းသားတွေအောက် တစ်နည်းနည်းနဲ့ ဖြစ်နေတယ်လို့ မထင်မိဘူးလို့ ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အချက်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်- ဤအလုပ်နှစ်ခုစလုံးသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီး နည်းပညာအဆင့်မြင့်ပြီး လစာကောင်းသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများဆီသို့ ဦးတည်ကာ4နှစ်ဘွဲ့ကို မလိုအပ်ပါ။ တချို့က ၂ နှစ်တောင် မလိုဘူး။
ဒါဟာ တကယ်ကို လျစ်လျူရှုထားတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါပဲ။ အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် အခုခေတ်မှာ ဘွဲ့တစ်ခုလိုမယ်လို့ လူတိုင်းက ထင်နေကြတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ 'အာမခံပေါ်လစီ' လို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် စိန်ခေါ်မှုနဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို လိုချင်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အတွက် အပျော်ရဆုံးနဲ့ အသီးအနှံများတဲ့ လမ်းကြောင်းလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
PS: Office Space ကို ကြိုက်တယ်။
ဇွန် 25, 2008 မှာ 7: 35 pm တွင်
“အနှစ်တစ်ထောင်” ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်တော် ငြင်းဆိုပါသည်။ ဤနေရာတွင် သင်ပြောသမျှကို သဘောတူပါ။
သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကို တွေ့ပြီး အဲဒီသေနတ်နဲ့ ကော်ကိုးတစ်လိုင်းယူပါ။ မင်းလိုအပ်တော့မယ်။
PC Load letter #$@# ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။